चिनियाँ टोलीको रेल सम्भाव्यता अध्ययन सकारात्मक, आउला त रेल? « Deshko News
चिनियाँ टोलीको रेल सम्भाव्यता अध्ययन सकारात्मक, आउला त रेल?
नेपाललाई रेलमार्गबाट आफ्नो रेल सञ्जालमा जोड्ने विषयमा चिनियाँ अध्ययन टोली सकारात्मक देखिएको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर औपचारिक रूपमा प्रक्रियाले गति लिन नसकेको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनमा आएको चिनियाँ टोलीले त्यस्तो सङ्केत गरेको हो।
मङ्गलबारदेखि बिहीवारसम्म प्रस्तावित रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनमा टोली सक्रिय थियो । उक्त रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भिक छलफलकै क्रममा रहेका बेला चिनियाँ सरकारको रेलवे एडमिनिष्ट्रशनका उपप्रमुख जेङ जियनसहितको टोलीले स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
रेलमार्ग निर्माणका विषयमा पहिलोपटक स्थलगत अध्ययन भएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मङ्गलवारदेखि चिनियाँ टोलीले काठमाडौंदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्य स्थानको अवलोकन बिहीवार सम्पन्न गरेको छ ।’ उनले अध्ययनका क्रममा लगानी तथा रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ टोली सकारात्मक देखिएको बताए ।
दुई देशको व्यापारिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका कारण पनि नेपाल–चीनलाई रेलमार्गले जोड्न आवश्यक देखिएको छ । सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तय गरेअनुसारको सम्भावित रूटमध्ये केरुङ—काठमाडौं करीब १ सय किलोमिटर र काठमाडौं—पोखरा १ सय ८७ किमीको अध्ययन गरेको छ ।
तर, पोखरा–लुम्बिनीको दूरीका साथै सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुन नसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमै रहेका कारण उक्त रेलमार्गको निश्चित दूरी, लागतका विषयमा पनि यकिन हुन सकेको छैन । नेपाल र चिनियाँ सरकारका अधिकारीहरूको भेटमा पनि यो रेलमार्ग निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । –आर्थिक अभियानबाट साभार